Gịnị bụ ping exe? - Njehie
Isi > Njehie > Ping.exe ngwa njehie - olee otu ị si edozi
Ping.exe ngwa njehie - olee otu ị si edozi
Gịnị bụ ping exe?
ping.exea makwaara ya dị ka TCP / IPPingIwu. Ọ bụ faịlụ ziri ezi nke sọftụwia Windows Operating System nke Microsoft Corporation mepụtara. Ọ bụ ebe ndabara na PC bụ C: \_ Windows \_ System32. Ndị mmemme malware na-emepụta faịlị na malware wee kpọọ ha ahaping.exeigbasa virus na ịntanetị.
Ekele m unu, n’isiokwu a anyị ga-ekwu maka otu ihe eji arụ ọrụ ọtụtụ ebe eji arụ ọrụ na netwọkụ ma ana m ekwu maka iwu ping.
Hotmail ezoro ezo email
Ugbu a iwu ping bụ ngwa dị mfe ị nwere ike iji dozie nsogbu netwọkụ dịka njikọta netwọkụ. Ya mere ị nwere ike iji ya nwalee ma ọ bụrụ na ejikọrọ gị na netwọk mpaghara ma ọ bụ ọbụlagodi ịntanetị. I nwekwara ike iji ya nwalee na netwọk gị kaadị na-arụ ọrụ nke ọma, na ọ na-eji iji nwalee DNS mbipụta dị ka mkpebi mkpebi.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị ping adreesị IP nke ndị ọbịa. Ugbu a onye nnabata a nwere ike ịbụ ngwaọrụ netwọkụ ọ bụla, dịka ọmụmaatụ kọmputa, sava, rawụta ma ọ bụ onye nbipute, n'agbanyeghị ma ọ dị na netwọkụ mpaghara gị ma ọ bụ na Internetntanetị. Mana na ihe atụ a, anyị ga - eji ping sava na netwọkụ anyị.
Ya mere, anyị ga-emeghe iwu ozugbo wee pịnye okwu ping yana adreesị IP nke sava ahụ wee banye banye. Mgbe ahụ, ping ọrụ na-eziga ngwugwu data 4 na adreesị IP nke ihe nkesa ahụ, mgbe ahụ kọmputa anyị na-echere nzaghachi. Mgbe ahụ ihe nkesa na-eziga data data ka anyị laghachi dịka nzaghachi na azịza ndị a ka a na-akpọ arịrịọ nzaghachi nkuzi na azịza ndị a na-agwa gị ihe na-eme na sava ahụ anyị pinged.
Yabụ ọ bụrụ na anyị nwetara azịza, dịka ọmụmaatụ, nke ahụ bụ ezigbo akara. Nke a pụtara na enwere njikọ netwọkụ n’etiti anyị na sava ahụ, agbanyeghị ma sava a dị na netwọkụ dị n’ógbè gị ma ọ bụ na ntanetị. Ya mere eziga 4 ngwugwu wee nata 4 ngwugwu.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ping otu sava ahụ wee ghara ịza nzaghachi n'oge a, ọ pụtara na ihe nkesa anaghị aza ma ọ nwere ike ịpụta na enweghị njikọ netwọkụ n'etiti kọmputa anyị na sava ahụ. Enwere ike ịnwe ọtụtụ ihe kpatara nke a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị ping sava ahụ wee nweta ozi na-asị 'Arịrịọ arịrịọ ka ọ kwụsị', ọ nwere ike ịpụta na sava ahụ dị ala ma ọ bụ na sava ahụ adịla, mana firewall na-eji nke ahụ iji gbochie arịrịọ ping niile.
Ugbu a gịnị ma ọ bụrụ n ’ị chọọ ịpị ndị ọbịa na ọ bụghị ngwugwu data niile zara gị? Iji maa atụ, mgbe ị na -aga ping ọbịa, kọmputa gị ga-ezipụ ngwungwu data 4. Agbanyeghị, oge ụfọdụ ị ga-enweta ngwugwu 1, 2 ma ọ bụ 3 naanị karịa 4 nke izipụrụ. A maara nke ọma dị ka ọnwụ ngwugwu na ọnwụ nha nwere ike ime maka ọtụtụ ihe.
Ọ nwere ike ịpụta na enwere mkpọchi netwọkụ. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ okporo ụzọ na netwọkụ na netwọk enweghị ike ijikwa okporo ụzọ ndị a, a na-atụfu ngwugwu data ahụ. Ma ọ bụ ọ pụkwara ịbụ n'ihi ngwaike na-ezighi ezi, dị ka B. eriri ndị na-adịghị mma ma ọ bụ waya na-adịghị mma.
Ma ọ bụ ọ nwere ike bụrụ kaadị ọjọọ ma ọ bụ njikọta, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ mọdem ọjọọ, nke mere m na nke m. A afọ ole na ole gara aga mgbe m na-mgbe niile lagging n'azụ fọrọ nke nta ka ihe niile m mere na ịntanetị. N'ihi ya, m mere ule ping na-aga n'ihu wee daa opekata mpe otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngwugwu m.
N'ihi ya, m kpebiri na ọ ga-abụ m modem. N'ihi ya, m gbanwere ya ma dozie nsogbu ahụ. Ma ọ bụ n'ọnọdụ ọzọ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpị ihe nkesa dịpụrụ adịpụ na ịntanetị ma nata ozi na-asị 'Onye ọbịa agaghị enweta ya' ọ pụtara na ọ nweghị ụzọ ịga ebe a ga-achọta.
Ya mere nke a nwere ike ịpụta na onye rawụta enweghị ozi ọ bụla iji dọrọ data gaa ebe ọ na-aga, ma ọ bụ na ihe nkesa dịpụrụ adịpụ adaala ma ọ bụ kwụsịrị na netwọk ahụ. Ma ọ bụ ọ nwere ike ịpụta na kọmputa gị enweghị njikọ na netwọkụ. Yabụ ka anyị jiri iwu ping n'ụdị ọnọdụ.
Were ya na mmadụ gwara m na ha enweghị njikọ becausentanetị n'ihi na ha enweghị ike ịnweta ibe weebụ na kọmputa ha, nke bụ ezigbo nsogbu. Ihe mbụ m na-eme bụ ịnọdụ ala na kọmputa ha ma jiri ọrụ ping hụ ma ọ bụrụ na ha ejikọghị na ịntanetị. Ya mere, tupu m lelee modem gị, router, ma ọ bụ njikọ njikọ USB ọ bụla, ihe mbụ m na-eme bụ ịnwale ule ping dị mfe.
Ya mere, m ga-emepe iwu ozugbo wee hụ ma m nwere ike ping weebụsaịtị ka yahoo.com. Ugbu a, rịba ama na site na usoro a, m na-ebu ping na ngalaba aha yahoo.com, ọ bụghị adreesị IP ya.
N'ihi na nke a bụkwa otu m si enyocha aha mkpebi metụtara DNS, na mgbakwunye, echebeghị m adreesị IP Yahoo. Site na pinging yahoo.com ma ọ bụrụ na ping ga-aga nke ọma, m ga-ama na anyị ejikọrọ na ịntanetị n'ihi na m nwetara nzaghachi nke ọma site na yahoo.com.
Mgbe ahụ m na-akpaghị aka mara na akụrụngwa m niile dịka eriri m, kaadị netwọk, rawụta, na modem na-arụ ọrụ nke ọma, gụnyere ISP m. Ugbu a amaara m na ihe kpatara kọmputa a enweghị ike ịnweta ibe weebụ metụtara software, ọ bụghị ngwaike. Ya mere, nsogbu bụ dịcha na ihe nchọgharị gị na internet ma ọ bụ na ọ bụ a firewall nsogbu.
Site na mbu mee nyocha ping, echekwara m onwe m oge dị ukwuu site na izere nsogbu nke ịchọ modem ma ọ bụ router, na-achọ ndị LED, na-elele eriri, ma ọ bụ na-ele anya n'azụ kọmputa iji hụ ma eriri netwọk ejiri na netwọk m. kaadị. M nọdụrụ ala wee mee nnwale ping dị mfe. Yabụ naanị ịlele ngwaike gị ma ọ bụrụ na ping ahụ emeghị nke ọma.
Agbanyeghị, tupu ịmalite inyocha akụrụngwa gị, ịnwere ike iji iwu ping ka ịlelekwa ihe ndị ọzọ, dịka: B. Nwalee na kaadị netwọkụ gị na-arụ ọrụ nke ọma. A maara nke a dị ka ule loopback.
Nnwale a loopback na-ezigharị akara na kọmputa gị maka ebumnuche nnwale. Yabụ na iwu ozugbo m ga-ping ping wee loopback IP address 127.0.0.1, ma ọ bụ ị nwere ike pịnye 'ping localhost' nke na-eme otu ihe ahụ.
Ma ọ bụrụ na ping na-aga nke ọma, ịnwere ike ijide n'aka na kaadị netwọkụ gị na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ule akaghị azụ dara, enwere nsogbu na kaadị netwọkụ gị. Ugbu a enwere ike iji iwu ping nwalee nsogbu na mkpebi aha DNS.
Ọ bụrụ na ịmaghị DNS, biko lee isiokwu DNS m na ọwa YouTube m. Ma na nkenke, DNS na-edozi ngalaba aha na adreesị IP. Dị ka ị na-echeta, m mere ule ping site na ping ngalaba aha 'yahoo.com' kama adreesị IP ya.
Dị ka m kwuru, ọ bụrụ na ping nwere ihe ịga nke ọma, ọ pụtara na ngwaike m niile na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ọ na-ekwetakwa na DNS na-arụ ọrụ nke ọma. Dịka ị pụrụ ịhụ, e doziere DNS nke ọma yana adreesị IP maka yahoo.com hụrụ.
Mana mgbe anyị ping yahoo.com ma nweta ozi na-ekwu na arịrịọ ping enweghị ike ịchọta onye ọbịa yahoo.com.
Biko lelee aha wee nwaa ọzọ 'mgbe ahụ, nke a nwere ike ịbụ nsogbu DNS dịka kọmputa anyị enweghị ike idozi ngalaba aha na adreesị IP. Ọzọ, ọ bụrụ na ị maraworị ihe adreesị IP bụ, gbalịa pinging adreesị IP kama. Ma ọ bụ ọ bụrụ na i meghị ya, dị ka ọtụtụ n’ime anyị adịghị ama, ị nwere ike tinye adreesị IP dị mfe icheta, dị ka: B.
Adreesị IP nke Google nke bụ 8.8.8.8.
Ọ bụrụ na ping nwere ihe ịga nke ọma n'oge a, ọ ga-akwado nkwenye Nke a bụ nsogbu DNS dị ka kọmputa nwere ike ping adreesị IP mana ọ bụghị ngalaba aha. Iji dozie nke a, enwere ụfọdụ ihe ị nwere ike ịnwale. Nwere ike ịnwa iwepụ DNS gị site na ịpị 'ipconfig / flushdns' na iwu ozugbo ma ọ bụ na ịchọrọ ịlele ntọala DNS gị na nhazi kaadị netwọk gị ọ nwekwara ike ịbụ nsogbu na sava DNS n'onwe ha ma ọ bụ nsogbu na ISP gị.
microsoft foto kpachie
N'ikpeazụ, a ga-ejikọkwa iwu ping yana obere iwu ndị ọzọ akpọrọ 'switches'. A na-eji ngbanwe iji gbanwee oke nke ping ọrụ na ị nwere ike ịhụ ndepụta zuru ezu nke ngbanwe ndị a site na ịpị 'ping /?' banye.
Kedu ka m ga esi edozi njehie exe?
Etu esi edozi exe akwụsịla ịrụ ọrụ
Gbaa mmemme na ndakọrịta mode.
Gbaa mmemme ahụ dị ka onye nchịkwa.
Hazie ntọala mgbochi Mwepu data.
Nyochaa maka nje na malware.
IdoziFaịlụ sistemụ Windows.
Melite ndị ọkwọ ụgbọala gị.
Tinyegharịa usoro ihe omume ahụ.
22bọchị 22 2021
Ndewo ndị enyi n’isiokwu a, a ga m egosi gị otu esi edozi nrụrụ dll mebiri emebi site na iji sistemụ faịlụ sistemụ.
Pịa mmalite ụdị mmalite ma ọ bụ CMD na igbe ọchụchọ. Mechie windo a ozugbo ruo mgbe afọ nkwenye bụ 100% zuru ezu. Mgbe usoro ahụ zuru ezu, ịnwere ike ịnweta otu n'ime ozi ndị a ma ọ bụrụ na ị zutere ozi a na Windows Resource Protection adịghị Achọpụtala mmebi iwu iguzosi ike n'ezi ihe.
Nke a pụtara na ị gaghị enwe ihe ọ bụla na-efu ma ọ bụ merụọ faịlụ sistemụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọta njehie ndị a Windows Resource Protection enweghị ike ịrụ ọrụ a rịọrọ iji dozie esemokwu a, na-agba ọsọ System File Checker, nyochaa na Nchekwa na ọnọdụ iji dozie faịlụ ndị emerụ aka Pịnye thedị iwu na-esote wee pịa Tinye Ugbu a mepee SFCdetails dot txt file na desktọọpụ gị SFC nkọwa ntụpọ txt faịlụ na-eji ụdị n'okpuru mgbe na-ekpebi nke usoro faịlụ na-emerụ na ọ bụghị Ugbu a jiri nkọwa nkọwa na SFC-Detailsdot-txt faịlụ ahụ iji chọpụta ebe faịlụ ahụ mebiri emebi dị. Mgbe ahụ jiri ezigbo akwụkwọ nke faịlụ a dochie faịlụ mebiri emebi iji mee nke a. Soro usoro ndị a iji nweta ya Nweta ezigbo nnomi nke faịlụ sistemụ ahụ na kọmputa ọzọ na-agba otu mbipute nke W Esi agba indows na kọmputa gị iji ndutịm nwe nke rụrụ arụ usoro faịlụ Mee ndị na-esonụ: Mepee ụdị agbara ozugbo ụdị iwu na-esonụ wee pịa Tinye inye Admin rators zuru inweta usoro ihe rụrụ arụ iji nye aka.
Soro usoro dị n'okpuru Pịnye iwu na-esote wee pịa Tinye iji dochie faịlụ sistemụ rụrụ arụ nke nwere ezigbo nnomi nke faịlụ sistemụ ahụ Ee ee wee pịa s ifdị ma ọ bụrụ na ịchọta njehie a, usoro ahụ enweghị ike ịnweta faịlụ ahụ n'ihi na ọ bụ eji usoro ozo. Ọ pụtara na usoro a na-eji faịlụ ahụ, iji dozie njehie a, ịkwesịrị ịwụnye ngwá ọrụ Usoro Explorer ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọta ozi a, ọ pụtara na faịlụ ọhụrụ mebiri emebi site na ọhụrụ
Olee otu m ga edozi WMIC exe error?
Etu esi edozi WMIC.exe Njehiena Nzọụkwụ 3 (Oge iji wuchaa: ~ 5-15 nkeji)
1kwụ na 1kwụ 1: Weghachi PC gị na ihe ọhụrụ weghachi ebe, 'snapshot '